Meksika: Manam-pahaizana manokana momba ny ady amin’ny fakana an-keriny nisy naka an-keriny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2008 20:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, Português, Swahili, English
Miroborobo ny heloka bevava any Meksika, ka samy tratran'ny fakana an-keriny avokoa na tompontany na vahiny (vazaha). Vao nisy tany Saltillo, Coahuila, raha nentin'olona mitam-piadiana misarontava ny manam-pahaizana manokana momba ny ady amin'ny fakana an-keriny Amerikana Félix Batista. Tonga eto moa i Batista mba hanao seminera amin'ny maha-filan-kevitra avy amin'ny orinasam-piambenana miorina any Texas antsoina hoe ASI Global LLC azy. Tadiavin'ny vondrona (orinasa na fikambanana…) noho ny fahazarana nananany manerana an'i Amerika latina izy amin'ny tetika ialana amin'ity karazan-keloka ity. Na izany aza dia manaporofo izao tranga izao fa mety ho tratrany avokoa na iza na iza.
Latsa-panontaniana amin'izao trangam-pakana an-keriny izao i The Mex Files :
Raha manam-pahaizana manokana momba ity raharaha ity i Batista, ahoana no mbola mahatonga azy ho tratran'ny fakana an-keriny?Mpiasa tao amin'ny “filan-kevitra momba ny fiambenana (na fiarovana olona)” antsoina hoe ASI Global miorina any Houston Texas i Batista. Araka ny tatitra dia raharahany manokana no nandehanany tany Saltilo, fa iza moa no iasany (amin'io fotoana io)
Moa ve anisan'ny nahazo vatsy momba ny “Plan Merida” ilay orinasa Amerikana ASI Global… Ary ahoana ary ny lazainy amin'ny fahakingan'ny mpanazatra ao aminy izao?
Misy antontan'isa mametraka fa roa isan'andro eo ho eo ny trangana fakana an-keriny mitranga anyindrindra fa any amin'ny tapany avaratry ny firenena manamorona ny sisintany. Meksika no manana ny tahan'ny fakana an-keriny ambony indrindra manerana izao tontolo izao isan'olona. Tena manohina ny namana sy ny havan'ireny tratran'ny fakana an-keriny ireny ity tranga ity, tahaka ny mpamaham-bolongana Tony Scotti, izay naman'i Batista:
Fantatro i Felix, ary olona tena kinga sy havanana tokoa izy. Olona manana fahazaran-draharaha 20 taona izy tao amin'ny fandraharahana K&R. Manana laza tsara i Felix, lazain'ny gazety matetika ary raha ny marina dia vao nolazaina tao amin'ny gazetiboky misahana ny fiambenana sy ny fiarovana. Noho izay lazany izay mihitsy no antony niteraka ny fakana an-keriny azy. Taorian'ny famakiako ny filazan'ny gazety di maminavina aho fa nisy nametraka izy (namitaka) ary olona akaiky azy ihany no namitaka azy.
El Nahual ao amin'ny México Para Los Mexicanos [es] dia manahy mafy amin'izay dikan'iy raharah aity hoan'ny hafa etoamin'ny firenena:
Ny nataoko voalohany indrindra aloha dia ny nihomehy, noho ny endrika maneso ao aminy. ny tao amiko faharoa indray dia ny tahotra… raha miaramila afaka manana fahazaran-draharaha 24 taona eo amin'ny sehatry ny fiarovana no nisy naka an-keriny, dia ahoana izany isika ambiny ireto amin'izy ahatafavoahantsika tsy hisy haka an-keriny?